WOWOW कमर्शियल किचेन नल पोट फिलर पास्ता आर्म क्रोम-WOWOW नल
घर / भान्साको नल / भाँडो फिलर किचेन faucets / WOWOW वाणिज्यिक रसोई पॉट फिलर पास्ता आर्म क्रोम
WOWOW वाणिज्यिक रसोई पॉट फिलर पास्ता आर्म क्रोम
Amazon US अमेजन CA अमेजन एमएक्स स्थापना निर्देशन PDF
उच्च गुणस्तर: पर्खाल माउन्ट लामो हात नल, उच्च घनत्व शुद्ध ब्रास/कपर निर्मित (2.885 lb), अन्य सस्तो नलहरू जस्तै होइन, लामो समयसम्म प्रयोग जीवन भारी शुल्क गुणस्तर द्वारा सुनिश्चित गरिएको छ,
पालिश गरिएको भित्री सतह, भाँडो फिलरबाट गुजरने प्रत्येक थोपा प्राकृतिक र स्वस्थ हो, कुनै हानिकारक सामग्री छैन; सुरुचिपूर्ण क्रोम फिनिश, बलियो, सीसा-मुक्त, जंग-प्रतिरोधी
कार्यात्मक फोल्डिंग वाल-माउन्ट नल: दोहोरो प्रवाह नियन्त्रणका लागि २ भल्भहरू, डबल जोडिएको स्पाउट २०″ सम्म फैलिएको छ, स्टेनलेस स्टीलको नल प्रयोगमा नभएको बेला बाहिर निस्कन्छ। भाँडो फिलरको साथ, खाना पकाउन सजिलो छ। अद्वितीय भित्ता माउन्ट स्थापनाले काउन्टरमा अतिरिक्त ठाउँको लागि अनुमति दिन्छ जबकि असाधारण पहुँच प्रदान गर्दछ।
ठूलो पानी प्रवाह दर:2ह्यान्डल फोल्डिंग नलमा स्थिर दबाव, सीधा लगातार पानी प्रवाह प्रदान गर्ने neoperl एरेटर छ। ABS एरेटरले ५०% पानी बचत गर्छ र एन्टी-स्प्लेटर, ड्रिप-फ्री सिरेमिक कार्ट्रिज टिक्छ।
जडानकर्ताको साथ सजिलो स्थापना: लीड फ्री किचन नलको थ्रेड साइज 1/2" NPS हो, र 1/2" NPS देखि 1/2" NPT कनेक्टरले सुसज्जित छ, केवल चिसो पानी प्रयोग।
वारेन्टी, ग्राहक समर्थन: 5-वर्ष वारेन्टी र समयमै ग्राहक समर्थन प्रस्ताव गरिएको छ। यो 90-दिन सीमित रिटर्न द्वारा कभर गरिएको छ। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया तपाइँको अर्डर मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
WOWOW कमर्शियल किचेन नल पोट फिलर पास्ता आर्म क्रोम
तपाईंको भान्सा स्टोभ २2311100१११० सी का लागि भाँडो फिलर नल
भाँडा फिलर नल तपाईको भान्साको लागि लामो, जोडिएको हातमा व्यावहारिक स्विing आउट नल हो। सामान्यतया एक भाँडा फिलर नल तपाइँको भान्सा मा स्टोभ मा चढिएको छ। यस तरिकाले तपाईं भाँडामा पानी भर्नको लागि सक्षम हुनुहुनेछ, जबकि तिनीहरू चुलोमा पहिले नै राखिन्छन्। यो जस्तो तपाईले भारी भरी भाँडाहरू बोक्नु पर्दैन, तपाईंको भान्साको सिinkबाट तपाईंको भान्साको चुल्होमा। परम्परागत भाँडो फिलर नलहरू अन्य किचनको सिink्क नलका साथ भ्रमित हुनुहुन्न जुनसँग जोडिएको हात छ। भाँडो फिलर नल र एक जोडेको किचन सि .्क नल बीच मुख्य भिन्नता तातो पानी आपूर्ति हो। एक भाँडो फिलर नलको साथ केवल एक चिसो पानी आपूर्ति आवश्यक छ। तर पक्कै पनि तपाइँ सजिलैसँग भाँडाको फिलर नललाई जोड्नुहोस् किन्नु भएको किचन सिink्क नलसँग तपाईको किचेन डिजाइनमा अन्तिम सद्भाव पुग्न।
जब तपाईं आफ्नो भान्साकोठा डिजाइन गर्नुहुन्छ, सुरुमा तपाईं प्राय: सोच्नुहुन्छ कि तपाईंको सपनाको भान्छा कस्तो हुनुपर्छ। तर हुनसक्छ तपाईको नयाँ सपनाको भान्साको कार्यक्षमता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। तपाईंले कसरी पकाउनुहुन्छ, कस्तो प्रकारको उपकरण चाहिन्छ, तपाईंलाई प्रकाश स्रोतहरू चाहिन्छ, र तपाईं कसरी सजिलै आफ्नो भान्साकोठा राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईंले सोच्नु पर्छ। तपाईंको भान्साकोठामा उपकरणको प्रत्येक टुक्राहरूको विकल्पको विस्तृत प्रकारको प्रस्ताव छ। यो तपाईंको रसोईको faucets को लागि पनि गणना गर्दछ। तर एउटा पक्ष जुन प्रायः भुल्दछ, एक भाँडो पस्टा पास्ता हातको नलको अन्तिम कार्यक्षमता हो। केवल किनभने यो व्यापक रूपमा परिचित छैन। अर्कोतर्फ यस प्रकारको भान्साको नलले तपाईंको खानालाई धेरै सजिलो बनाउँदछ जब तपाईं पकाउँदै हुनुहुन्छ।
तपाईंलाई किन भाँडा फिलर किन्चको नल चाहिन्छ?
पास्ता आर्मल नलको सब भन्दा ठूलो समर्थक भनेको यो हो कि यसले तपाईंलाई भान्साको भाँडोमा भाँचेर तपाईंको घरको भान्साको चुलोमा भान्साको डुink्गाबाट पानी बचाउन सक्छ। यो विशेष गरी तपाईंको लागि ठूलो फाइदा हुन सक्छ जब तपाईं भारी वस्तुहरू बोक्न वा गर्न चाहनुहुन्न। भारी भाँडो बोक्दा तपाईंको हात, हतियार र पछाडि तनाव हुन सक्छ। त्यो असुविधाजनक हुन सक्छ जब तपाईं पहिले नै आफ्नो पछाडि वा हतियार मा पीडा अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। यसका साथै, यस्तो पनि हुन्छ कि ठूला भाँडाहरू तपाईंको भान्साको सिink्कमा फिट हुँदैनन्। यस कारणले पानीलाई ठूलो भाँडोमा भर्नु चुनौती हुन सक्छ।
तपाईं दुई आधारभूत विकल्पहरू मध्येबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जब यो पटा फिलर faucets मा आउँदछ। त्यहाँ एकल जोडिएको र डबल जोडिएको पॉट फिलर faucets छन्। यो तपाईंको भान्छाको चुलोको आकारमा निर्भर गर्दछ जुन तपाईंको लागि उत्तम काम गर्दछ। यदि तपाईंसँग धेरै बर्नरहरूको साथ भान्साको स्टोभ छ भने, डबल जोर्नीहरूको साथ भाँडो फिलर नल यसको पहुँचको कारण सबै भन्दा राम्रो काम गर्दछ। WOWOW आधुनिक फार्महाउस पट फिलर नल पॉलिश क्रोम तपाईंलाई २० इन्चको कुल पुग्नको साथ डबल जोर्ने हात प्रदान गर्दछ। यो लामो भाँडो फिलर नलको साथ तपाईं आफ्नो भान्सा स्टोभको कुनै पनि ठाउँमा पुग्न सक्नुहुनेछ र त्यसकारण अधिकतम सान्त्वना प्रदान गर्दछ।
व्यावहारिक भाँडो फिलर पास्ता आर्म रसोईको नल सुविधाहरू
WOWOW को भाँडो फिलर नल यसको जोडिएको पाखुराको साथ धेरै सजिलो छ, किनकि तपाईंले हातलाई पूर्ण रूपमा स्टोभ पर्खालमा फिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले यसले तपाईको भान्छामा कुनै ठाउँ लिने छैन र यो अन्धकार देखिनेछैन। यसको अनुकूलनीय लेआउटको कारण तपाईं बहुमूल्य किचन स्पेस बचत गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको उच्च सजावटको भान्साको स्टाइलिश डिजाइनको सम्मान गर्न यो उच्च-गुणस्तरको भाँडो नल टाढा राख्न सकिन्छ। तपाईंले आफ्नो भित्तामा यस भाँडो फिलर नललाई सायद याद गर्नुहुनेछ!
धेरै व्यक्तिहरू डराउँछन् कि एउटा भाँडो फिलर नल चुहिन सक्छ र तपाईंको भान्छामा पानीको हानी गर्दछ। भान्साको सिink्कको नली जस्तो नभई, सिसिलो पानी किचनको सिink द्वारा समात्न सकिन्छ। भाँडो फिलरको नलको साथ पानी तपाईंको भान्साको स्टोभ वा भान्साको काउन्टरमा खस्कन सक्छ। र अन्ततः तपाईंको भान्छाको भुइँमा जसले केही हदसम्म नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ। सुरक्षा कारणका लागि, भाँडो फिलर नल प्राय: दुई लिभरले सुसज्जित हुन्छन्। यस तरिकाले भाँडो फिलर नल ड्रेपिंगबाट दुईपटक सुरक्षित हुन्छ। WOWOW को भाँडो नलको विस्तारित हातमा डुअल फ्लो कन्ट्रोलको लागि दुई भल्भहरू छन्। जब तपाईं खाना पकाएर समाप्त हुन्छ, तपाईं केवल मुख्य भल्भलाई पनि बन्द गर्नुहोस्, ताकि पानी पनी पनी पनी पनी पारिन सक्तैन। यस तरीकाले तपाईको भान्छाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिएको छ।
उच्च गुणस्तरको भाँडो नल
WOWOW आधुनिक फार्महाउस पट फिलर नल पॉलिश क्रोम सबैभन्दा आधुनिक प्रविधि द्वारा बनाइएको छ। यस तरिकाले WOWOW इष्टतम प्रदर्शनको लागि यस भाँडो फिलर नलको सटीक आयामहरू सुनिश्चित गर्दछ। यस WOWOW भाँडो फिलर नलले यसको लामो गुणवत्ता ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ यसको उच्च गुणस्तर पालिश भित्री सतहको कारण। यो शुद्ध उच्च घनत्व पीतल (तामा) बाट बनेको छ। तपाईं सफा पिउने पानी कुनै पनि खतरनाक पदार्थ बिना यस नलबाट निस्कने सुनिश्चित हुनुहुन्छ। तपाईंको स्वास्थ्य सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण छ! केहिको लागि होइन WOWOW को यस उत्पादनलाई आईएसओ-प्रमाणित गरिएको छ।
यस भाँडो फिलर पास्ता हात नल संग उत्कृष्ट पानी आपूर्ति
उच्च गुणवत्ता 360 XNUMX०-डिग्री फुटबलको साथ, तपाईं लगभग कुनै पनि ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ र तपाईं केहि पनि सजीलै भरिन्छ। भल्भहरू उत्तम गुणको बनेका छन् र ह्यान्डल गर्न धेरै सहज छन्। तपाईले गुणस्तर तुरून्त देख्नुहुन्छ जब तपाईं भल्भहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ स्ट्रिम मोड पानी भर्नको लागि उत्तम छ। स्थिर पानीको प्रवाह प्रस्ताव गर्न यसले स्थिर दबाव दिन्छ। उच्च-प्रेशर भल्भहरू तपाईंलाई उत्तम आराम प्रदान गर्न छप्पर र ड्रिपिंग बेवास्ता गर्दछन्। र तपाईको भान्साको नलबाट तपाईलाई चाहिने यही कुरा चाहिन्छ!
WOWOW को भाँडो फिलर नल ब्रश गरिएको र निकेलको साथ समाप्त भयो। यसमा उत्कृष्ट पालिश क्रोम फिनिश छ जुन लगभग कुनै पनि डिजाइन किचनमा फिट हुनेछ। WOWOW को भाँडो नल स्क्र्याच-प्रतिरोधी र धुउन सजिलो छ। तपाइँको भाँडो फिलर नल कायम गर्न यत्तिको सजिलो छ। तपाईं आफ्नो भाँडो फिलर नललाई लामो समयको लागि नयाँको रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। WOWOW ले यसको सबै faucets मा year बर्षे वारंटी प्रदान गर्दछ। यस कारणका लागि तपाईंलाई थाँहा छ कि तपाईंले एक भाँडो फिलर नल भेट्टाउनुभयो जुन तपाईंलाई उत्तम मूल्य-गुणस्तर अनुपात प्रदान गर्दछ। हाम्रो-०-दिनको पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टीको साथ, तपाईं कुनै पनि समस्या बिना तपाईंको भाँडो फिलर नल फर्काउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई यो मनपर्दैन भने। तर हामीलाई थाहा छ कि यो हुने छैन। हामी हाम्रो उत्पादनमा विश्वास गर्छौं!
संक्षेपमा भाँडो फिलर नलका फाइदाहरू:
Your सजिलैसँग आफ्नो स्टोभमा तपाईंको भाँडा भर्नुहोस्
Easily व्यावहारिक जोडिएको हात सजिलैसँग भाँडो फिलर नलको टाढा राख्नको लागि
Ti इष्टतम लचकताको लागि दोहोरो सशस्त्र
20 तपाईं सजीलै २० ईन्चमा पहुँचयोग्य ठाउँमा पुग्न सक्नुहुनेछ
। अद्वितीय पॉलिश क्रोम डिजाइन
SKU: 2311100 XNUMX१C विभाग: भान्साको नल, भाँडो फिलर किचेन faucets टैग: पास्ता पाखुरा, पोलिश, भाँडो फिलर, पर्खाल चढाइयो
15.51 x 9.61 x 2.05 इन्च
भाँडो फिलर नल क्रोम
पटा फिलर नल फोल्डि Double डबल ह्यान्डल क्रोम
वाणिज्यिक / रेस्टुरेन्ट / आवासीय / इनडोर
भाँडो फिलर नल / NPT कनेक्टर; Neoperl ABS aeractor; चढ्ने सहायक उपकरण (जर्मन फिशर नायलन ए an्कर बोल्ट)
WOWOW बर्तन फिलर वाणिज्यिक पर्खाल माउन्ट नल M ...